प्रेम विवाह भएको ६ वर्ष सम्म पनि छोराछोरी नभएपछि श्रीमती फरार | Butwal Dainik
प्रेम विवाह भएको ६ वर्ष सम्म पनि छोराछोरी नभएपछि श्रीमती फरार
मोरङ जिल्लाको बेलबारी बेतना घर भइ बसोबास गर्दै आएका राजु रसाइलि नाम गरेका एक पुरुष आज बिगत केही दिनदेखि सम्पर्कबिहिन भएकी उनकी सुश्मा नाम गरेकी श्रीमतीलाई खोज्दै खोज्दै मिडियासामु आइपुगेका छ्न । उनकी श्रीमतीले घर छाडेर हिसिसकेपछि अनेक ठाउमा खोजी गर्दा पनि उनलाइ सम्पर्कमा ल्याउन नसकेपछी राजु अहिले मिडियामा आउन बा’ध्य भएका छ्न ।
बिहानै सुगुरको मासु लिन गएका राजुलाई घर फर्किन केही ढिला भएपछी उनकी श्रीमती उनलाइ लिन गएको तर घर आएपछि उनले मासु पकाउन इन्कार गरेको र यसै निहुमा सामान्य झै’झ’ग’डा पनि परेको बताउछ्न राजु । रि’सा’उ’दै भएपनी मासु पकाएकी उनकी श्रीमतीका कान्छी आमा दाजु र एक भाइ पनि लक्ष्मीमार्गबाट त्यही दिन आएको कुरा पनि उनले बताए । उनिहरुलाइ खाना खुवाएर १ बजेतिर बेतनाबाट गाडी चढाइदिन्छु भनेर गएकी उनको अहिलेसम्म कुनै अ’त्तो’प’त्तो नरहेको बताउछ्न श्रीमानचाहिँ ।
माइतीबाट उनले आफुलाई नखोज्नु म काठमाडौमा छु र म यतै काम गर्छु भनेर म्यासेज पठाएकी रहिछिन उनले । प्रेम गरेर बिबाह गरेकि उनकी श्रीमतीले यसरी अलपत्र छाडेर जादा यता श्रीमान भने म’र्नु न बाच्नुको स्थितिमा छन । दुबैजनाको मन परापर भएतापनी प्रपोज भने सुश्माले नै गरेकी रहिछिन राजुलाइ । बिबाह भएको तिनबर्ष बित्दा नबित्दै किन छाडिन त आफुले यति धेरै प्रेम गरेर बिबाह गरेको श्रीमानलाइ ?
प्रहरीलाई पनि खबर गरिसकेका छन राजुले । क’ठै ब’रा ! एकदमै छ’ट्’प’टी हुन्छ भन्छ्न उनि । सुश्माकै दिदिको एकलाख रुपैयाँ ऋण पनि चलाएका रहेछ्न उनिहरुले तर आज पैसा तिर्ने बेलामा भने आफ्नी श्रीमती पनि साथमा नहुदा एकदमै पि’डा’मा छन राजु । असाध्यै माया गर्छन उनी सुश्मालाइ, यति धेरै कि यदि उनी अर्कै पुरुषसग गएकी छिन भने उनको खुशिको लागि उनलाइ छाड्न पनि सक्छ्न ।
क’ठै ब’रा यसो भन्छन उनी ” यदि कसैसग गएकै हो भने मेरो त जिन्दगी ब’र्बा’द गर्यो गर्यो उसको किन ब’र्बा’द गर्ने ।” यदि उ अरु कसैसग खुशी छ भने उसैसग जिन्दगि बिताओस तर ल’था’लि’ङ्ग भएको व्यबहार चाहिँ मिलाओस भन्छ्न उनी । उनिहरु रमाउन खुशी होउन समेत भने उनले । यसो भने उनले “आखिर मैले के मा कमि गरेको थिए र उसले मलाइ यो सब गर्यो, उसको लागि घरपरिवार सारासंसार सबै भु’ले’को थिए तर उसले मलाइ यस्तो घा’त गर्यो ।”